2012 ~ Arakan Oil Watch
10:48 AM Arakan Oil Watch No comments
To download the briefer,please follow the link:
Burma's Resource Curse Report (Burmese)
10:39 AM Arakan Oil Watch No comments
To download the full report(Burmese),Please follow the link:
Burma's Resource Curse Report (English)
10:35 AM Arakan Oil Watch No comments
To download the full report(English),please follow the link:
10:20 AM Arakan Oil Watch No comments
ห้ามเผยแพร่ก่อน 22 มีนาคม 2555
นักลงทุนเริ่มหลั่งไหลเข้าไปในพม่า ซึ่งยังขาดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้เกี่ยวกับรายได้ ซึ่งจะยิ่งส่งผลให้เกิดมรดกบาปด้านทรัพยากรมากขึ้นของประเทศนี้ กลุ่มเคลื่อนไหวเตือนในวันนี้
จากข้อมูลในรายงานของกลุ่ม Arakan Oil Watch รายได้จากก๊าซธรรมชาติหลายพันล้านเหรียญไม่ได้รับการบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสมและไม่ได้เข้ากระเป๋าของรัฐ แต่กลับถูกโยกไปเข้ากระเป๋าของนายทหารที่ทุจริต ส่งผลให้พม่ายังคงเป็นประเทศที่มีดัชนีชี้วัดด้านสังคมเลวร้ายสุดในโลก และเต็มไปด้วยความขัดแย้งเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติ
การส่งออกก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งรายได้จากต่างประเทศใหญ่สุดของพม่า คิดเป็นจำนวน 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปีนับแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นอีก 60% หลังมีการส่งก๊าซงวดใหม่ไปให้กับประเทศจีนและไทยตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไป ในปัจจุบัน บริษัทจากต่างชาติหลายแห่งได้เข้ามาสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซเพิ่มเติมอีก 41 แห่ง
แม้ว่ารัฐบาลใหม่จะพยายามปรับปรุงระบบการจัดทำงบประมาณ แต่ก็ยังไม่เปิดเผยข้อมูลรายได้อย่างละเอียดและการใช้จ่ายเงินรายได้จากน้ำมันและก๊าซ บทบาทของหน่วยงานทหารที่ควบคุมดูแลรายได้จากก๊าซก็ดูคลุมเครือ
“ในขณะที่มีแผนการสร้างท่อก๊าซเส้นใหม่และมีนักลงทุนหลั่งไหลเข้าไปในประเทศมากขึ้น คนพม่าจำเป็นต้องทราบว่ารายได้จากการขายก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ไหนและถูกใช้ไปอย่างไรบ้าง” Jockai Khaing แห่งกลุ่ม Arakan Oil Watch กล่าว “รายได้ใหม่ที่ไม่มีการตรวจสอบจะยิ่งทำให้ทหารมีบทบาทครอบงำเศรษฐกิจลึกซึ้งขึ้น”
รายงานเรียกร้องให้มีการกำหนดกฎหมายและจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารรายได้จากการขายก๊าซและน้ำมันอย่างโปร่งใส ก่อนที่จะปล่อยให้นักลงทุนจากต่างชาติมาหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติต่อไป พม่าจำเป็นต้องมีกฎหมายที่กำหนดให้มีการประเมินผลกระทบและให้มีการขอความยินยอมอย่างเสรี ล่วงหน้า และเกิดจากความเข้าใจของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อประกันการคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม
สำหรับรายงานฉบับเต็มซึ่งมีกรณีศึกษาระบบความโปร่งใสด้านรายได้จากการขายน้ำมันและก๊าซในประเทศร่ำรวย โปรดดู http://www.arakanoilwatch.blogspot.com/
Arakan Oil Watch เป็นองค์กรชุมชนที่ติดตามตรวจสอบโครงการน้ำมันและก๊าซในพม่า
Jockai Khaing +66 82 184 1335
+66 88 157 1328
10:15 AM Arakan Oil Watch No comments
周凯：+66 82 184 1335
：+66 88 157 1328
10:11 AM Arakan Oil Watch No comments
၂ဝ၁၂၊ မတ်လ(၂၂)ရက် နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ရန်ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့သယံဇာတကျိန်စာ အဆုံးသတ်ရန် စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မှ ပြောကြား
မြန်မာနိုင်ငံထဲသို့ စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အလုံးအရင်းနှင့်စတင်ဝင်ရောက် လာကြသော်လည်း တိုင်းပြည်တွင်းတွင် ဘဏ္ဍာငွေဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်တာဝန်ခံမှု ဆိတ်သုန်းကင်းမဲ့နေခြင်းက တိုင်းပြည်၏ သဘာဝသယံဇာတကျိန်စာအား ပို၍ပင်ဆိုးရွားသွားစေသည်ဟု ရခိုင့်ရေနံစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့မှ ယနေ့ သတိပေးပြောကြားလိုက်သည်။
သဘာဝဓါတ်ငွေ့တင်ပို့ရောင်းချရာမှရရှိသော ဘဏ္ဍာဝင်ငွေ ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကို ပြည့်သူ့ ငွေစာရင်းများထဲတွင် ထည့်သွင်းခြင်းမရှိဘဲ အကျင့်ပျက်ခြစားနေသော စစ်ခေါင်းဆောင်များကသာ မတရား အလွှဲသုံးစားပြုလုပ်နေကြသောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဆိုးရွားဆုံး လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ညွှန်းကိန်းများနှင့်တိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်နေပြီး၊ သဘာဝသယံဇာတဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများနှင့်ပြဿနာများကို လည်း ရင်ဆိုင်နေရသည်ဟု အဆိုပါအဖွဲ့က ပြောကြားသည်။
သဘာဝဓါတ်ငွေ့တင်ပို့ရောင်းချမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အကြီးမားဆုံးသော နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိရာ အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီး၊ (၂ဝဝ၆) ခုနှစ် ကတည်းပင် ထိုသို့တင်ပို့ရောင်းချခြင်းမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂)ဘီလီယံကျော်ကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ရရှိနေသည်။ အသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသော ဓါတ်ငွေ့များကိုလည်း တရုတ် နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံများသို့ နောင်နှစ်အစောပိုင်းကာလတွင် တင်ပို့ရောင်းချမည်ဖြစ်ရာ ယခုရရှိနေသော ဘဏ္ဍာဝင်ငွေ ပမာဏထက် (၆ဝ) ရာခိုင်နှုန်းခန့် မြင့်တက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင်လည်း နောက်ထပ် ရေနံနှင့်ဓါတ်ငွေ့ လုပ်ကွက်(၄၁)ခုတွင် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများက စမ်းသပ်ရှာဖွေ၊တူးဖေါ်မှု များပြုလုပ်နေကြသည်။
ယ္ခုတက်လာသည့်အစိုးရသစ်က နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာ အောင် လုပ်ဆောင်နေသော်လည်း ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့မှ ရရှိသည့်ဝင်ငွေများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ကို ထုတ်ဖေါ်ထားခြင်းမရှိပေ။ ဓါတ်ငွေ့မှရရှိသော ဘဏ္ဍာငွေများအပေါ် ထိန်းချုပ်မှုတွင် စစ်တပ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှု အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း သေးကွဲစွာ မသိရှိရပေ။
“နောင်နှစ်မှာတင်ပို့မဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းအသစ်များနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ အများကြီး ဝင်လာနေကြတဲ့အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ မြန်မာပြည်တွေအနေနဲ အဲဒီ ဓါတ်ငွေ့ကရတဲ့ ဝင်ငွေတွေကို ဘယ်မှာထားလဲ၊ ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတာကို အမြန်ဆုံးသိဖို့လိုအပ်နေတယ်” ဟု ရခိုင့်ရေနံစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မှ ဒါရိုက်တာ ကျော်ခိုင်မှ ပြောသည်။
“ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘဲ ပုံအောပြီး အသစ်ဝင်လာနေတဲ့ ငွေကြေးတွေဟာ စစ်တပ်ကကြီးစိုးထားတဲ့ စီးပွားရေးစနစ်ကိုသာ ဒီထက်ပိုပြီး အမြစ်တွယ်ခိုင်မာသွားစေလိမ့်မယ်” ဟု ကိုကျော်ခိုင်မှ ဆက်ပြောသည်။
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နောက်ထပ် သဘာဝသယံဇာတ ရှာဖွေတူးဖေါ်မှု များမပြုလုပ်မီ နိုင်ငံတွင်းတွင် ရေနံနှင့်ဓါတ်ငွ့ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာငွေများကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်မည့် ဥပဒေများ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများကို ပြဋ္ဌာန်းတည်ဆောက်ထားရမည်ဟု အစီရင်ခံစာက ထောက်ပြ တောင်းဆိုထားသည်။
အခွင့်အရေးများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များအပေါ် အကာအကွယ်ပေးနိုင်စေရေးအတွက် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုလေ့လာချက်များနှင့် ထိခိုက်ခံရမည့် လူ့အဖွဲ့ အစည်းများထံမှ လွတ်လွတ်လပ်လပ်၊ကြိုတင်ပြီး နားလည်ထားသော သဘောတူခွင့်ပြုချက်များ(FPIC) ကို လိုက်နာရသည့် ဥပဒေများအား ထုတ်ပြန်ပြဋ္ဌာန်ရန်လည်း လိုအပ်သည်။
အစီရင်ခံစာထဲတွင် ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ကြွယ်ဝသော အခြားနိုင်ငံများ၏ ဘဏ္ဍာငွေပွင့်လင်းမြင်သာမှု စံနစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်များကိုလည်း တင်ပြထားသည်။အစီရင်ခံစာအပြည်အစုံကို www.arakanoilwatch.blogspot.com တွင်ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
ရခိုင့်ရေနံစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်း စီမံကိန်းများအား စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာစောင့်ကြည့်နေသော လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျော်ခိုင် (+66 82 184 1335)
(+66 88 157 1328)
10:06 AM Arakan Oil Watch No comments
EMBARGOED FOR MARCH 22, 2012
End Burma’s Resource Curse Says Watchdog Group
As investors start flooding in to Burma,alack of revenue transparency and accountability is set to exacerbate the country’s resource curse, warnsawatchdog group today.
According toareport by the Arakan Oil Watch, billions of dollars in revenues from the sale of natural gas have gone unrecorded in Burma’s public accounts and been siphoned off by corrupt military rulers, leaving Burma with some of the worst social indicators in the world and embroiled in conflicts over natural resources.
Natural gas exports are the biggest foreign income earner for Burma, amounting to over US$2 billion in sales per year since 2006. Revenues are set to increase by 60% as new gas exports to China and Thailand begin as early as next year. An additional 41 oil and gas blocks are currently under exploration by various foreign companies.
Despite recent moves by the new government to improve the budgetary process, detailed income and disbursement of oil and gas revenues remain undisclosed. The role of military enterprises in controlling gas revenues is also opaque.
“With new gas projects in the pipeline and more investors pouring in, Burma’s people urgently need to know where the gas money is and how it is spent” said Jockai Khaing of the Arakan Oil Watch. “A new influx of revenues without transparency will simply entrench military dominance of the economy.”
The report calls for the establishment of laws and institutions which will manage oil and gas revenues transparently before further extraction of natural resources by foreign investors. Laws that require impact assessments and the free, prior and informed consent of affected communities are also needed to ensure the protection of rights and the environment.
To see the full report, which includes case studies of revenue transparency systems from other oil and gas rich countries, please visit http://www.arakanoilwatch.blogspot.com/
The Arakan Oil Watch isacommunity-based organization monitoring oil and gas projects in Burma.
၂ဝ၁၂၊ မတ်လ(၂၂)ရက် နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ရန်ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့သယံဇာတကျိန်စာ အဆုံးသတ်ရန် စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မှ ပြောကြား မြန်မာနိုင်ငံထဲသို့ စီးပွားေ...
2012 年3月 22 日前禁止发布 监察团体：结束缅甸的资源诅咒 随着投资者开始涌入缅甸，收益透明度及问责机制的缺失正加剧该国的资源诅咒，一个监察团体在今天发出警告。 由阿拉干石油观察发布的一份报告显示，数十亿美元的天然气销售收入没有记录进缅甸的国家账户，而被腐败的军...
ห้ามเผยแพร่ก่อน 22 มีนาคม 2555 กลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ยุติมรดกบาปด้านทรัพยากรของพม่า นักลงทุนเริ่มหลั่งไหลเข้าไปในพม่า ซึ่งยังขาดความโ...
EMBARGOED FOR MARCH 22, 2012 End Burma’s Resource Curse Says Watchdog Group As investors start flooding in to Burma,alack of revenue tr...
Copyright © 2011 Arakan Oil Watch | Powered by Blogger